Maxaa ku dhici kara carruurta dagaal yahannada Daacish? - BBC News Somali
Maxaa ku dhici kara carruurta dagaal yahannada Daacish?
Haweeney Faransiis ah oo uu la socdo canuggeeda iyagoo ku sugan xero ku taalla waqooyiga Suuriya
Kumannaan carruur ah ayaa ku xayiran dalka Suuriya, iyagoo wajahaya mustaqbal ana kala caddeyn oo khatartiisa leh, sida ay ka digtay hay`ad samafal.
Hay`adda Save the Children ayaa sheegtay inay xog ku heshay in in ka badan 2,500 oo carruur ah oo ka soo jeeda 30 dal ay ku jiraan saddex xero keliya.
Carruurtan ayaa waxaa lagu hayaa meelo goonni ah, iyagoo ay la socdaan haween ajnabi ah oo la rumeysan yahay inay ka tirsanaayeen ururka Daacish.
Britain oo si naadir ah dhalasho ugala laabanaysa hooyo umul ah
Trump oo dalka ka hor istaagay gabadh Dawladda Islaamka ku biirtay
Digniintan ayaa imaaneysa iyadoo ay dood ka taagan tahay waxa laga yeeli lahaa carruurtaas.
Arrintan ayaa walaac dhalisay kaddib markii tiro haween ah ay sheegeen inay ka shallaynayaan wixii ay sameeyeen ayna doonayaan inay dalalkooda dib ugu laabtaan, dalalkaas oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska, si ay carruurtooda si nabad ah ugu korsadaan.
Iyagoo taas ka jawaabaya, ayaa UK iyo Mareykanku waxay labo hooyo ka diideen inay dib u soo laabtaan. Balse maxay tani uga dhigan tahay carruurtooda, iyo kumannaanka kale - oo qaarkood ay maalmo uun dhallan yihiin - kuwaasoo ku dhex dhashay dagaal caalami ah?
Xaggee ayay hadda ku sugan yihiin carruurta dagaalyahannada Daacish?
Way adag tahay in la sheego halka rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin dhammaan carruurta. Balse waxaa la oran karaa waxay ugu yaraan ku baahsan yihiin labo dal: Suuriya iyo Ciraaq.
Xaaladda xeryaha ku yaalla waqooyiga Suuriya ayaa ah mid aad u xun, Save the Children ayaa sidaasi sheegtay. Waxaa carruurtan lagu hayaa meel go`doonsan mana helaan cunto badan iyo daryeel caafimaad si la mid ah carruurta kale.
Khatar miyaa ku jirta in carruurta la soo celiyo?
Waxaa la sheegay in carruurtaasi gaar ahaan wiilasha la siiyay tababar milatari iyagoo aad u da` yar.
Si kastaba, hay`adaha ayaa ku baaqaya inay habboon tahay in walaaca jira wax laga qabto iyadoo aan dadka la isku wada qabaneynin. Waxay sidoo kale ka digayaan in carruurta oo aan la soo celinnin ay saameyn ba`an reebi doonto mustaqbalka.